UDAISY RIDLEY UKHULULA I-EPIC LIGHTSABER IDABI PHAKATHI KUKAREY NOKYLO - KYLO REN
Umboniso Wamva Nje Kunye No-Stephen Colbert
Ayisiyonto ininzi yokuchitha ukuba, ewe, uRey (uDaisy Ridley) noKylo Ren (uAdam Driver) baya kujongana Iimfazwe zeNkwenkwezi: Ukunyuka kweSkywalker . Aba babini balwa Umkhosi uyavusa Kwaye (okwethutyana) amanyene IJedi yokugqibela , kodwa ifilimu yokugqibela yaphela kunye nabo kumacala ajongeneyo kwakhona. Njengabasebenzisi abaphambili boMkhosi kumnyele ngelo xesha, becinga ukuba bazokulwa kufana nokucinga ukuba uLuka noDarth Vader banokuba ne-duel Ukubuya kweJedi .
UDaisy Ridley kutshanje bahlekisa umlo ukuze Iindaba zeMTV , esithi, Silwe kakhulu. Umlo omkhulu. Kwaye ndonwabe ngokwenene kukuba into evanithi ngokuthambile imifanekiso ibonise kancinci ngayo. Kukulwa okuhle. Njengokuba ndiye ndaba ngumlo ongcono kwaye bayenza ikhanyise i-lightabers, ke oko kukhangeleka ngathi sitshintshela ukukhanya kwaye asifani nobunzima, ubunzima.
Wu tang clan yentsimbi ngenqindi
Uye wongeza ukuba ngokufota umlo ngokwawo wawunamandla. Lo mlo, sawenza, kwakungoNovemba, sasiphoswa amanzi kuthi, kwaye ndafumana intlonipho enkulu kuba andizange, ndandingayi 'kukhala ngokubandayo, andizuku yenze (uhleke) -ngoko ke yayifana nento yokwenyani. Ivakala iyindumasi ngokwenene, kwaye yaziva i-epic nangelo xesha. Khawufane ucinge, besinawo amaza anje, kwaye azakwenza ukuba amaza abe makhulu, kwaye umntu unokucinga ukuba kuya kujongeka kanjani.
Ifoto kuphela esinayo yedabi le-lightaber ibonisa uRey noKylo emvuleni, bemi ngaphezulu kwento ethile engaziwayo kwaye bezilungiselela ukuduma. Akukho sazisi sinikiweyo malunga nendawo esikuyo, kodwa xa sinikwe amafu esibhakabhaka esiwabona eqokelelene phezu kobunzima beNkanyezi yokufa kunye nokubandakanywa kwamaza (ubutyobo buselwandle), kubonakala ngathi le duel iyakwenzeka Ukuqhekeka kwesikhululo sedabi sase-Imperial esasikratshi.
Ngelixa u-Obi-Wan ejongene noJango Fett kwimvula kwi Ukuhlaselwa kwamaClones , okwangoku asizukubona inyathelo lokuphila elisekwe emvuleni phakathi kwabasebenzisi boMkhosi ababini. Amandla okubonakalayo ayakholeleka, kwaye asinika imeko-bume entsha engaphaya kweplanethi enendawo enye okanye igumbi letrone lomntu ombi. Siza kufumana into esingazange siyibone ngaphambili, eyenza ukuba izinto ezibonakalayo zibonakale ngcono.
Singaphikisana de ifilimu uqobo lwayo iphume ngoDisemba malunga nokuba ingaba oku kuphakathi kumboniso bhanyabhanya okanye ukuya esiphelweni, nokuba esi sisiphelo seRey-Kylo esinamandla okanye ukuba sisandulela sokubuyela ekubeni amahlakani, kodwa inye into endiziva ndikhululekile ukuyithetha yile, ukuba bayalwa kwi-Dead Star wreckage, ndinoluvo lokuba baya kujongana nxamnye nePalpatine kwaye nangona kunjalo iceba ukwenza inkangeleko ngasekupheleni kwesibini .
Iimuvi nguDavid o russell
I-teaser trailer yachitha i-intanethi xa kutyhilwa ukuba u-Emperor Palpatine, owayecinga ukuba ufile kudala, wayeza kudlala indima ethile kwifilimu yokugqibela ye-Skywalker Saga. U-Palpatine usweleke kwi-Star Star yesibini, apho umlo ungakho. Ke ngoko, ngekhe kumangalise ukuba i-duel iqale njengo-Rey no-Kylo belwa bodwa kwaye iphele ngo-Palpatine evele ngathi, Molo bantwana abakhohlakeleyo; lixesha lokubulala.
Isimbozo sencwadi yobugcisa engekazukukhutshwa yefilimu ibonisa uRey ngokuchasene nomqolo obomvu ongasemva kunye noKylo Ren, oboniswe ngokuchasene naye kwindawo eluhlaza okwesibhakabhaka. Kumboniso Iimfazwe zeNkwenkwezi zeMfazwe , I-Palpatine ithathe inxaxheba ekufumaneni iHlabathi phakathi kweHlabathi, isango elichitha ixesha kunye nendawo kwaye lihambelana kakhulu noMkhosi. Ngaba uPalpatine wayenokuyifumana indlela yokusebenzisa loo portal ukukopela ukufa, kwaye angathumela uRey noKylo ukuba basebenzise ixesha elifanelekileyo le-duel epic?
Kufuneka silinde de kube nguDisemba ukuze sive. Umlo we-lightaber kwakufuneka ulindelwe, kodwa izibonda ziphezulu kwaye ukubonwa kuvakala kuhle. Andikwazi kulinda ukuba ndibone indlela le mpi edlala ngayo kwisikrini esikhulu.
indawo ye-adventure iphelile
(nge Iindaba zeMTV , umfanekiso: Lucasfilm)
Kwiveki Ephelileyo Ngokuhlwa Kunye Nojohn Oliver
Inenekazi Kunye Nokunyashwa
Imbongi Egama Lingu Shi
U-mary umkhulu u-harry potter isahluko sobugcisa
Ihlabathi alonelanga elektra
ubilise amanzi kwimicrowave yeti
Yintoni igama lokuqala le-dr
umdlalo wetrone yitrone cosplay
intombazana emnyama kwintombazana ehlebayo